PK0 Soarano :: Nampanakoako ny kanto feno angola i Rija sy Lalatiana • AoRaha
PK0 Soarano Nampanakoako ny kanto feno angola i Rija sy Lalatiana
Ny zoma alina teo no nifanome fotoana tamin’ ireo mpankafy azy tetsy amin’ ny PK0 Soarano i Lalatiana sy Rija Ramanantoanina ka nanoloran’izy ireo kanto maroloko. Samy manana feo miavaka izy mianadahy. Naredona avokoa ireo hirany izay tsy maty am-bavan’ny tsirairay.
Nampihetsi-po ireo mpijery ny nandray an’i Rija sy Lalatiana teny an-tsehatra satria tsy dia fahita firy loatra ny seho iarahan’ireto andrarezin’ny mozika malagasy ireto. Notetezin-dry zareo avokoa ireo fotoana maro nahafantaran’ny rehetra azy.
Samy niventso ny hirany izy mianadahy. Fotoana iray tena nankafizin’ireo mpanatrika ny fampiaraham-peon’izy mianadahy. Samy noventsoina niaraka avokoa na ny hiran’ i Rija Ramanantoanina na ny hiran’i Lalatiana. Horakoraka tsy nisy ohatran’izany kosa nandritra ny fiangalian’izy ireo an’ilay « Hasambarana » an’i Jérôme Randria.
Lapan’ny kolontsaina Mahamasina :: Vitsy mpijery kanefa niavaka ny seho noentin’ny TGC
Fiainana tovovavy tia mihira :: Ho vadin’asa no iheveran’i Elodie ny mozika, any aoriana any